RASMI: Barcelona Oo Faah Faahin Ka Bixisay Jadwalka Soo Bandhigida Saxiixa Cusub Ee Antoine Griezmann Iyo Arin Qariib Ah Oo Ku Jirta. - Gool24.Net
RASMI: Barcelona Oo Faah Faahin Ka Bixisay Jadwalka Soo Bandhigida Saxiixa Cusub Ee Antoine Griezmann Iyo Arin Qariib Ah Oo Ku Jirta.
July 13, 2019 Mahamoud Batalaale
Kadib markii ay kooxda Barcelona si rasmi ah u bixisay lacagtii heshiiska Antoine Griezmann lagu burburin karayay ee ay kooxda Atletico Madrid iyo xidiga reer France laba dariiq kala maraysay waxay maamulka Camp Nou shaaciyeen jadwalka lagu soo bandhigi doono Griezmann.
Barcelona ayaa faah faahin ka bixisay dariiqa uu mari doono Antoine Griezmann marka uu soo gaadho Camp Nou ilaa inta uu ka dhamaysanayo bandhiga saxaafada ee loo samayn doono.
Arinta qariibka ah ee ku jirta bandhiga heshiiska Antoine Griezmann ayaa ah in xidiga reer France lagu soo bandhigi doono Camp Nou oo madhan oo aan wax taageerayaal ahi joogin.
Sababta ayna Barcelona garoonkeeda Camp Nou taageerayaasha ugu furi doonin inta uu bandhiga Antoine Griezmann socdo ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo in ay falcelin xun bixiyaan maadaama oo uu hal sano ka hor Griezmann ka laabtay go’aankii uu Barca kula heshiiyay.
Laakiin arin kale oo Barcelona u diidaysa in ay Camp Nou albaabada ugu furto taageerayaasha kooxdeeda ayaa ah in shaqo dib u cusboonaysiin ahi ay ka socoto garoonka dhexdiisa inkasta oo ayna taasi ahaateen sababta ugu wayn oo goobta la fadhiisanayo ayna shaqo ka socon.
Taageerayaasha Barcelona ayaa loo sheegay in ay baraha bulshada kooxdooda iyo Barca TV ay si toos ah uga daawan karaan bandhiga loo samaynayo Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann ayaa sabtida barri soo gaadhi doona Camp Nou marka ay saacadu tahay 9:00pm CEST waxaana laga qaadi doonaa sawirada ugu horeeya isaga oo ah ciyaartoy Barca ah, laakiin waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa maalinta axada.
Halkan kag abogo Jadwalka Antoine Griezmann ee uu Barcelona ku soo gaadhayo ilaa bandhigiisa oo dhan:
Sabtida, July 13
– Antoine Griezmann waxa sabtida barri soo gaadhi doonaa Barcelona. Waxaana laga qaadi doonaa sawirada ugu horeeya isaga oo xidhan maaliyada Barcelona markii ugu horaysay.
Axada, July 14
– 6.15pm CEST: waxa uu Griezmann saxiixi doonaa heshiiska shanta xili ciyaareed ah waxayna xaflada heshiis saxiixu ka dhici doontaa Llotja President Suñol iyada oo Bartomeu uu heshiiskan la saxiixan doono.
– 7.00pm CEST: Sawiro ayaa looga qaadi doonaa Camp Nou
– 7.30pm CEST: Waxaa bilaami doona bandhiga kadibna waxa uu shirka jaraa’id ku qaban doonaa Auditorium 1899
Bandhiga Antoine Griezmann waxaa laga daawan karaa FCBarcelona.com iyo Barça TV, wuxuuna liveku bilaami doonaa 6.15 pm CEST.